महाकविको गोप्य तमसुक / रोचक घिमिरे | Online Sahitya
एकजोर व्यक्ति प्रायः सँगै आउने गर्नुहुन्थ्यो । तिनलाई पिताजी 'साहिँलाबाजे र काहिँलाबाजे' भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू चाहिँ पिताजीलाई 'पण्डितजी' भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी मैले पनि ती दुई व्यक्तिलाई त्यसै रूपमा चिनेँ । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको टङ्गाल दरबारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो मेरा पिता-सोमनाथ घिमिरे व्यास । भीमशमशेरकी छोराबुहारी समुद्रकुमारी राणाकै सहयोगमा हाम्रो परिवार रामेछापबाट काठमाडौँ आई टङ्गालमा घरजम गरेर बसेको थियो । टङ्गाल दरबारमा चालिसे थर भएकी एक जना महिला प्रायः सानी छोरी लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई दरबारका मान्छेहरू 'नाकिनीबज्यै' भन्दथे । छोरीहरूको नाम चाहिँ गायत्री र ज्योति थियो । सानी ज्योतिलाई मेरा पिताजी 'दीपज्योति नमोस्तुते' भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो । नाकिनीबज्यैका दुई जना छोराको नाम जगन्नाथ र मदन थियो । मैले आमालाई सोधेँ- 'साहिँलाबाजे र काहिँलाबाजे को हुन् ? आमाले भन्नुभयो-दुवै जना नाकिनीबज्यैका भाइ हुन्, ज्योतिका मामा हुन् । पछि पिताजीबाट पो थाहा पाएँ- साहिँलाबाजे-लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुँदोरहेछ भने काहिँलाबाजे उहाँकै भाइ मधुसूदनप्रसाद देवकोटा हुनुहुँदोरहेछ । देवकोटाकी ठाहिँली दिदी नाकिनीबज्यै हुनुहुँदोरहेछ । किन उहाँलाई नाकिनीबज्यै भनियो, त्यो मैले बुझिन । महाकविसँग हाम्रो परिवारको निकटता नाकिनीबज्यैकै माध्यमले भएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ ।
पिताजीका मित्र साम्बभक्त सुवेदी (साहित्यिक सहिद कृष्णलालका साला) मलाई घरमा पढाउन आउनुहुन्थ्यो । उहाँले साहिँलाबाजेको साहित्यिक योगदानको बारेमा जानकारी दिनुभयो । मेरो बालसुलभ बुद्धिले के ठम्यायो भने यी राम्राराम्रा सिलोक लेख्ने ठूला कवि रहेछन् । साम्ब गुरुबाटै 'मुनामदन' अरू पुस्तक र राम्रा कविताहरू लेख्ने कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ठूला मान्छे हुन् भन्ने थाहा पाएँ मैले ।
मेरो स्मृति बिम्बका महाकविलाई विविध घटनाका माध्यमबाट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु । आफ्नो स्मृति सन्दर्भका माध्यमबाट उहाँको स्वभावका विशिष्ट पक्ष र उहाँको जीवनका अनुद्घाटित केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै ठहरिएला ।
भीमशमशेरका नाति सत्य शमशेरको दार्जीलिङको टुनबारीमा चियाबगान थियो । नेपालका इष्टमित्रहरूलाई त्यहाँबाट चियाको कोसेली आउने गर्थ्यो । हामीकहाँ पनि काठका बाकसमा चियाका पोका आउने गर्थ्ो । महाकविको घरमा चियाका पोका पुर्‍याउन पिताजी मलाई पनि पठाउने गर्नुहुन्थ्यो । देवकोटाका भानिज नाकिनीबज्यैका छोरा जगन्नाथलाई त नेपालमा त्यो चियाको बिक्रेता नै बनाइदिनुभएको थियो पिताजीले । म चिया पुर्‍याउन मैतीदेवीको घरमा गएको एक दिन महाकविले आफ्नी पत्नीसँग भन्नुभयो- 'पण्डितजीले त चिया खाने बानी नै पारिदिनुभयो त्यसमाथि ठाहिँली दिदीले पनि चिया पठाएर उपरिमाथि थुपरी पारिरहनुभएको छ अब त चियाको लत नै बूयो बा ' महाकविको परिवारमा चिया प्रवेश यसरी भएको रहेछ भन्ने अड्कल काटेँ मैले ।
पिताजीको कोठामा एकदिन भएको जमघट मेरो मनमा ताजा छ अहिले पनि । पिताजीको रुचि सङ्गीतमा पनि थियो । हारमोनियम, तबला, बाँसुरी, खैँजडीजूता वाद्ययन्त्र बजाउनुहुन्थ्यो उहाँ । शास्त्रीय सङ्गीत घन्किन्थ्यो कोठामा । त्यस दिनको जमघट त विशेष नै थियो । महाकवि! उहाँका भाइ मधुसूदन, योगी नरहरिनाथ, जनकलाल शर्मा र साम्बभक्त सुवेदीको उपस्थिति त्यहाँ रहेको सम्झना छ मलाई । महाकवि हारमोनियम बजाउँदै गाउँदै हुनुहुन्थ्यो । पिताजीका हात तबला ठोकिरहेका थिए, जनकलाल जाने पनि नजाने पनि बाँसुरी फुक्दै हुनुहुन्थ्यो । योगीजी र साम्ब गुरु हा...हा...गर्दै शब्दले ताल दिइरहनुभएको थियो । महाकविका मुखबाट त्यो बेला सुनेका गीतका दुई पङ्क्ति मात्र म अहिले सम्झन्छु । शास्त्रीय स्वरूपमा लय हालेर उहाँ यसरी गाउँदै हुनुहुन्थ्यो- 'तन्त्र तँ पर जा ! पर जा तन्त्र ! मन्त्र जपीतपी आ !" यिनै गेडालाई प्रमुखता दिएर उहाँले तन्मय भएर विभिन्न भावभङ्गमिामा निकैबेर गीत सुनाउनुभयो । हामी केटाकेटीहरू ढोकाको छेउमा उभिएर त्यो तमासा रमाइलो मानेर हेरिरहेका थियौँ । भर्खर प्रजातन्त्र आएको बेला राजनीतिक दलहरूले देखाएका अवाञ्छित कार्यकलाप र प्रजातन्त्रको खोलमा आएका विकृतिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै रचना गरिएको कविताका पङ्क्ति होलान् यी भन्ने मलाई लाग्दछ अचेल । यो कविता उहाँको सङ्कलनमा भए, नभएको जानकारी मलाई छैन ।
मेरा पिताजीको 'आशौच विज्ञान तथा घिमिरे वंशावली' नामक पुस्तक छापिने क्रममा थियो । त्यसैको पाण्डुलिपि मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ । त्यसैबेला महाकविजी भाइ मधुसूदनसहित आइपुग्नुभयो । कुराको प्रसङ्गमा त्यो पाण्डुलिपि उहाँहरूलाई देखाउनुभयो पिताजीले । महाकविले सर्सर्ती त्यसमा नजर दौडाउनुभयो । अनि पिताजीसँग कागत माग्दै भन्नुभयो- 'म यसको भूमिका लेखिदिन्छु !' पिताजीले आफ्नो लेटरप्याड र कलम दिनुभयो । महाकविले भन्नुभयो- 'लीलाशमशेरले मलाई उपहार दिएको अङ्ग्रेजी फाउन्टेन पेन छ मसँग, त्यही अङ्ग्रेजी कलमबाट अङ्ग्रेजीमा भूमिका लेखिदिन्छु ! कलम चाहिँदैन ।' यति भन्दै सरर्र दुई पानामा लेखेर पिताजीलाई दिनुभयो । ''यो नेपाली र संस्कृतमा लेखेको पुस्तकको भूमिका नेपालीमै लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा किन ?'' पिताजीको यस्तो प्रश्नको जवाफमा महाकविको भनाइ थियो- ''यो जमाना अङ्ग्रेजीबाजहरूको हो, अङ्ग्रेजीमा लेखेपछि यस पुस्तकको महत्व बढ्छ, तपाईंको पुस्तकको महत्व बढाउन मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेको हुँ ।'' महाकविको त्यो भूमिका २०१५ सालमा प्रकाशित त्यस पुस्तकमा रहेको छ । त्यसको पाण्डुलिपि मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ । अन्त्यमा आफ्नो नाम लेख्ने क्रममा महाकविले आफूलाई 'समटाइम एजुकेशन मिनिसटर' भनेर पनि लेख्नुभएको छ । महाकविले अङ्ग्रेजीमा लेखेको भूमिका यही मात्र हो कि अरू पनि छ भन्ने अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ ।
महाकवि प्रायः काहिँला भाइलाई लिएर नै हामीकहाँ आउनुहुन्थ्यो । उहाँ एक्लै आउनुभएको सम्झना छैन मलाई । त्यसदिन पनि उहाँहरू दुई जना पिताजीलाई भेट्न आइपुग्नुभयो । बिहानको समय र जाडो याम थियो । महाकविले दौरासुरुवाल, बाक्लो कोट, मख्खीबुट्टे टोपी र गलेबन्दी लगाउनुभएको थियो । पिताजीसँग कुराकानी सकेर उहाँहरू तल ओर्लनुभयो । जुत्ता तलै राख्ने चलन थियो । दुवै भाइले जुत्ता लगाउनुभयो । पिताजी पनि बिदा गर्न तलै आउनुभएको थियो । महाकवि हिँड्न लाग्दा दाहिने गोडाको जुत्ताको तलुवा पूरै जूतो खुस्किएको र लगाएर हिँड्नै नसकिने स्थितिमा पुगेको देखियो । तैपनि त्यही जुत्ता लगाएर ल्याफ्रयाकलफ्रयाफ्रयाक् गर्दै हिँड्ने सुर कस्नुभयो महाकविले । पिताजीले भन्नुभयो- ''साहिँलाबाजे ! म अर्को जुत्ता खोज्छु !'' महाकविलाई बल्लबल्ल मनाएर पिताजी जुत्ता खोज्न थाल्नुभयो । आफ्ना श्रद्देय मित्रलाई पुरानो जुत्ता दिएर अनादर गर्न पिताजीको आत्माले मानेन । नयाँ जुत्ता कतै भेटिएन । यसतै गम्भीर स्थितिमा पिताजीलाई झट्ट सम्झना भएछ- हिजो मात्र किनेको धागोको तलुवा भएको कपडाको चट्टी ! काठमाडौँमा घरभित्र त्यूतो चट्टी लगाउने चलन निकै थियो त्यसबेला । स्याण्डल अथवा चप्पल यहाँको बजारमा आइसकेको थिएन । पिताजीले त्यही नयाँ एकजोर चट्टी ल्याएर महाकविको खुट्टा अगाडि राख्तै भन्नुभयो- ''यो लगाएर जानुस् !'' हार्न नसकी त्यही चट्टी लगाएर पयाट्प्याट् गर्दै महाकवि हिँड्नुभो । त्यो बेलासम्म मैले महाकविको महत्व र मर्यादा बुझिसकेको थिएँ । महान् प्रतिभाले छोडेको यो जुत्ता पनि सङ्ग्राहणीय र अमूल्य निधि हो भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो एकजोर जुत्ता सुरक्षित रूपमा राखेँ मैले । मेरा भाइ बहिनीहरू पनि नेपाली साहित्य र महाकवि देवकोटाको महत्व बुझ्न सक्ने उमेर र बुद्धिका भइसकेका थिए । महाकविको निधनपछि देवकोटा जयन्ती मनाउने प्रचलन हाम्रो घरमा पनि सुरु गर्‍यौँ । महाकविका तिनै जुत्तालाई पिर्कामाथि राखेर मखमली फूलको माला लगाइदिएर प्रणाम गर्दै उनकै कविताका पङ्क्ति पढ्दै श्रद्धाञ्जली चढाएर प्रत्येक वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन देवकोटा जयन्ती मनाउने क्रम थाल्यौँ हामीले ।
केही वर्षसम्म यो क्रम चल्यो । मेरा भाइहरू अध्ययनको क्रममा बनारसतर्फ गए । म पनि आफ्नो व्यवहार र खेतीपातीका सन्दर्भमा २,३ वर्ष जनकपुर र सिराहामा बसेँ । पिताजी पनि काम विशेषले कलकत्ता र बनारसतिर नै धेरै समय बिताउनुहुन्थ्यो । वि.सं. २०२८ को लक्ष्मी जयन्तीका दिन म काठमाडौँ थिएँ । महाकविका ती जुत्तालाई पूजा गरेर जयन्ती मनाउन जुत्ता राखेको ठाउँमा खोजेँ तर ती जुत्ता पाइएनन् । घरको हेरविचार गर्न राखेको मान्छेले महत्व नबुझेर, काम नलाग्ने थोत्रा जुत्ता ठानेर फयाकिदिएछन् । ज्यादै नै थकथक लाग्यो मलाई । आफूसँग भएको दुर्लभ सम्पत्ति गुमेको अनुभूतिले रन्थन्यायो निकैदिन । यसपछि महाकविको तस्बिरलाई माला लगाएर देवकोटा जयन्ती मनाउन थाल्यौँ हामीले ।
क्यान्सर रोगले थलिएका महाकविलाई उपचार निम्ति वि.सं. २०१५ मा कलकत्ता लगियो । मेरा पिता पनि सो बेला कलकत्तामै बसनुहुन्थ्यो । बिरामी महाकविलाई अूपताल भर्ना गरिएको खबर सुनेर पिताजी भेट्न जानुभएछ । त्यहाँ श्रीमती मन देवकोटा, महाकविका भाइहरू- मधुसूदन देवकोटा, गोपीमाधव देवकोटा र महाकविकी पुत्री पनि हुनुहुँदोरहेछ । पिताजीलाई देखेर बिरामी महाकविको ओइलाएको मुहारमा अलिकति मुस्कान छाएछ । स्वास्थ्यसमबन्धी जानकारी लिएर पिताजी फेरि आउने वाचा मार्दै बिदा हुनै लाग्नुभएको बेला महाकविले भन्नुभएछ- ''पण्डितजी ! म यो बङ्गदेशमा मर्न चाहन्न, मेरो स्वास्थ्यमा कुनै सुधार छैन, म आफ्नै मुलुकको पाशुपत तीर्थमा, वागमती तटमा पुग्न आतुर भएको छु । ल्याएको खर्च सकियो, मलाई काठमाडौँ जान सहयोग गर्नुस् !'' महाकविको इच्छानुसार पिताजीले पाँच सय भा.रु दिनुभएछ । सो रुपियाँ लिएबापत कागज लेख्न भाइ मधुसूदनलाई अराउन लाग्नुभएछ महाकविले । मेरा पिताले सो कुरा अस्वीकार गर्दै भन्नुभएछ- ''तपाईंको व्यक्तित्वलाई पत्याएर मैले यो सहयोग गरेको हुँ, तमसुकलाई पत्याएर दिन खोजेको होइन साहिँलाबाजे ! तमसुक लेखेर मलाई लज्जित नपार्नुस् !'' तैपनि महाकविले आफू नजिक रहेका तीन/चार ओटा पुस्तक पत्रिकाहरूमा-मैले पण्डित सोमनाथ घिमिरेसँग पाँच सय कं.रू. सापट लिएको छु भनेर लेख्तै पिताजीलाई भन्नुभएछ-''तपाईंले कागज लिन मान्नुभएन, त्यति भएपछि म नरहे पनि त्यो देखेर मेरा परिवारले तपाईंको पैसा तिरिदिनेछन् ! मलाई शान्ति मिल्नेछ ।''
यसपछि परिवारसहित महाकवि काठमाडौँ आउनुभसयो । केही दिनपछि पिताजी पनि काठमाडौँ आउनुभयो । आफूले सहयोग गरेपछि महाकविले तमसुक लेखेर दिन खोजेको र आफूले नमानेको सबै वृत्तान्त पिताजीले हामीलाई सुनाउनुभयो र भन्नुभयो- ''त्यो पैसा माग्न अथवा ताकेता गर्न तिमीहरू नजानु नि ! उहाँहरूले आफैं दिए मात्र लिनु ।''
यस घटनाको केहीपछि पिताजी फेरि कलकत्ता जानुभयो । महाकवि घरैमा आराम गरिरहनुभएको थियो । एकदिन दिउँसो मधुसूदन देवकोटा हाम्रो घरमा आउनुभो र मलाई भन्नुभो-भोलि बिहान दाजुकहाँ भेट्न आउनु, बोलाउनुभएको छ । मैले ठानेँ महाकविले त्यही सापटी फिर्ता गर्न बोलाउनुभएको होला । म भोलिपल्ट बिहान महाकविको मैतीदेवी स्थित निवास कविकुञ्ज गएँ । काहिँलाभाइ मधुसूदन पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । महाकवि ओछ्यानमा पल्टिरहनुभएको थियो । मलाई देखेपछि उठ्नुभो । भाइसँग कागज र कलम मागेर लेख्न थाल्नुभो महाकवि । मेरा हजुरबाको नाम सोध्नुभो । मेरो बोलाउने नाम 'आत्मा' मात्र थाहा थियो उहाँलाई, न्वारानको नाम सोध्नुभो । मैले बताएँ । कागज लेखिसकेपछि मलाई दिँदै महाकविले भन्नुभो- ''बाबु ! यो कागज राख्नु तर पण्डितजीलाई नभन्नु, नदेखाउनु, उहाँले कागज लिन मान्नुभएन, मलाई यो नलेखी शान्ति भएन, ब्रहृमूवमा परिएला भन्ने चिन्ताले सताइरहेछ मलाई ! परेको बेला मात्र यो कागज झिक्नु, नत्र कसैलाई नदेखाउनु है !'' कागज बोकेर हिँडे म । बाटैमा हेरेँ- महाकविको हूताक्षरमा त्यो कागजमा यस्तो लेखिएको थियो- ''श्रीकान्तको नाति, पण्डित सोमनाथको छोरा का.ई. टङ्गाल बस्ने वर्ष १७ को घनानाथ घिमिरेसँग आजका मितिमा कम्पनी रुपियाँ पाँच सय ऋण लिएको छु । म्यादभित्र यो तिर्न नसके लीलाशमशेर ज.ब.रा.ले मलाई बकसपत्र गरी दिएको का.ई. जमलको यति चार किल्लाभित्रको आधा रोपनी जग्गा तपाईं साहूले भोगचलन गरी लिए मलाई मञ्जुर छ ।'' यस्तै बेहोरा भएको रीतपूर्वकको तमसुक थियो त्यो । साक्षीमा भाइ मधुसूदनलाई सही गराइएको थियो, दायाँबायाँ र पुछारमा महाकविले सहीछाप गर्नुभएको थियो । त्यस्तो कागत पढिसकेपछि आफ्ना खुट्टाले भुइँ छोडेको अनुभव भयो मलाई । मेरो केटौले बुद्धिमा मात चढ्न लाग्यो । त्यत्रा ठूला कवि मेरा ऋणी भए, म उनको साहू भएँ भन्ने घमण्ड चढ्यो ममा । कसैलाई पनि नभन्नु भनेर वाचा बँधाएका हुँदा यो कुरा मैले आफूभित्रै सीमित राखेँ । पिताजी त कलकत्तामै हुनुहुन्थ्यो । यहाँ भएपनि उहाँलाई भनेको भए 'साहिँलाबाजेले कागज गर्छुभन्दा आफूले नमानेको, आफ्नै छोराले चाहिँ यसतो तमसुक लिएछ! भनेर रिसाउनुहुन्थ्यो र पक्कै त्यो कागज च्यातिदिनुहुन्थ्यो । पाँच सय भा.रु.मा जमल जूतो ठाउँको आधा रोपनी जग्गा पाउने सम्भावना भएको त्यो कागज त्यसै त महत्वपूर्ण छँदैथियो, त्यसबाहेक नै पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हसताक्षरको त्यो तमसुक मेरा निम्ति निकै ठूलो उपलब्धि थियो भन्ने कुरा बुझेको थिएँ मैले । पैसा अथवा जग्गा पाए पनि नपाए पनि त्यो महत्वपूर्ण कागज आफूसँग सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहेको थिएँ मैले । कागजबारे महाकवि, उहाँका भाइ मधुसूदन र मबाहेक कसैलाई थाहा थिएन ।
मलाई त्यसतो तमसुक लेखेर दिएको केही दिनपछि नै महाकवि निकै थलिएर शान्तभवन अस्पताल भर्ना हुनुभयो । असपतालमा उहाँलाई हेर्न म दुई पटक गएँ । त्यस्तो अशक्त अवस्थामा पनि मलाई देखेपछि महाकवि आफ्नी पत्नी र भाई मधुसूदनलाई भन्नुहुन्थ्यो- ''पण्डितजीको रिन तिरिदेउ है ! मलाई ब्रहृमूव नलागोस् !'' उहाँलाई भेट्न जाँदा त्यै रिनको कुरा सम्झनु हुँदोरहेछ, झन् पीडा दायक हुँदोरहेछ भन्ने मलाई लाग्यो र पछि म अस्पताल गइँन । अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि महाकविलाई पशुपति आर्यघाट लगियो । साथी बाबुराम पौडेल र म वि.सं. २०१६ भदौ २९ गते बिहान उहाँलाई हेर्न गयौँ । निधारमा पशुपतिको चन्दन लगाइदिएर सुताइएका महाकवि हात जोडेर आगन्तुकहरूलाई नमस्कार गरिरहनुभएको थियो । तारको पङ्खा र ग्लुकोजको बट्टा पनि त्यहीँ थिए । श्रीमती देवकोटा नजिकै हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला मदनमणि दीक्षितले महाकविको तस्बिर खिच्नुभयो । त्यसै दिन साँझ ६ बजे तिर महाकविको निधन भएको खबर सुन्यौँ । अन्तिम अवस्थामा खिचिएको मदनमणि दीक्षितको हस्ताक्षरसमेतको त्यो तस्बिर मसँग सुरक्षित छँदैछ ।
महाकविको निधन भएपछि सरकारले उहाँलाई लागेको २२ हजार रिन तिरिदिने, अन्तिम संकारका निम्ति रु. तीन हजार दिने र महाकविका दुई जना छोरालाई वालिग नहुञ्जेल प्रत्येकलाई सय रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो ।
एकदिन बिहान मधुसूदन देवकोटा मकहाँ आउनुभयो र जेठादाजु लेखनाथ देवकोटाकहाँ भोलि दिउँसोतिर जानु भन्नुभयो । म निर्धारित समयमा डिल्लीबजार धोबीधारा स्थित लेखनाथ देवकोटाको घरमा गएँ । भाइले लिएको रिन तिर्न डाक्नुभएको रहेछ । उहाँले भन्नुभयो- ''पण्डितजी त कलकत्तामै हुनुहुँदोरहेछ । भाइले पाँच सय भा.रु. उहाँसँग लिएको रहेछ लौ बाबु यो रकम लैजानुस् कुनै कागज भाइले लेखिदिएको छ भने त्यो फिर्ता दिनुस् !'' लेखनाथ देवकोटाका यी कुरा सुनेपछि मेरो सपना भताभुङ्ग भयो । महाकविको त्यसतो कागज छैन भनौँ भने झुठा ठहरिने मधुसूदन देवकोटालाई समेत यो कुरा थाहै छ ! आउन लागेको रकम माया मारेर त्यो कागज राख्ने कुरा पनि भएन । पछि पिताजीलाई थाहा भयो भने झन् मेरो दुर्गति हुन्छ । यस्तै सोचेर मैले भनेँ- ''कागज त छ तर घरमा नै छुट्यो म लिएर आउँछु !'' घर आएर महाकविको त्यो तमसुक लिएर फेरि म पुगेँ लेखनाथ देवकोटाकहाँ । उहाँले त्यो कागज हेर्नुभो, मलाई पाँच सय भा.रु. दिनुभो र मेरै अगाडि ध्वार्र कागज च्यातेर फालिदिनुभो । मलाई कसैले आफ्नै छाती करौँतीले चिरेर फालिदिएजसतो लाग्यो । अहिलेको जस्तो त्यो बेला फोटोकपी गर्ने प्रविधि थिएन । कागजको तस्बिर चाहिँ खिच्न सकिँदोरहेछ तर त्यो बेला त्यस्तो बुद्धि आएन । यसरी महाकविको त्यस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र मूल्यवान् कागज मेरो हातबाट गुम्यो । आफ्नो जीवनको यो एउटा ज्यादै पीडादायी घटना ठानेको छु मैले । पहिले त त्यो कागजबाट ममा अहंमपना हुर्केको थियो तर पछि महाकविसँग आफ्नो परिवारको निकटता देखाउने मूल्यवान् चिनोको रूपमा लिएको थिएँ मैले त्यस तमसुकलाई । त्यो महत्वपूर्ण प्रसङ्गको अन्त्य त्यसरी विषादमय बनेको थियो । महाकविको त्यो तमसुकबारे मैले आफ्ना पिताजीलाई पनि उहाँको जीवनकालमा कहिल्यै बताइनँ । अरूलाई पनि थाहा दिइँन । कुरा थाहा पाउने मधुसूदन देवकोटा पनि उहिल्यै दिवङ्गत भइसक्नुभयो, सर्वप्रथम यहीँ उद्घाटित गरेको हुँ त्यो अनुद्घाटित तमसुक प्रसङ्ग ।
महाकविलाई लीलाशमशेरले बकस दिएको विश्वज्योति हलसँगैको जमलको त्यस्तो मूल्यवान् ठाउँको जग्गा, जुन आज करोडौँको सम्पत्ति हुनेथियो, त्यो के भयो ? कवि परिवारले भोग गर्न पाए वा पाएनन् त्यो मलाई थाहा छैन । यो एउटा खोजीको विषय हुनसक्छ आजको पुस्तालाई ।
महाकवि विषयको अन्तिम प्रसङ्ग उल्लेख गरेर यो संसमरण टुङ्ग्याउन चाहन्छु । वि.सं. २०२४ मा कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारी 'रचना' को सम्पादक मण्डलमा हुनुहुन्थ्यो । साझा प्रकाशनका जी.एम. हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँ । एकदिन अधिकारीले भन्नुभो- ''महाकविको एउटा महत्वपूर्ण समालोचनात्मक लेख प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा थन्किएको रहेछ । त्यो प्रकाशमा नआई त्यत्तिकै हराउने सम्भावना देखियो, के गर्ने ?'' त्यो बेला बालकृष्ण सम प्रज्ञामा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । समले लेखनाथ पौडेलको 'तरुण तपसी' मा लेखेको भूमिकासँग विमति जनाएर महाकविले लेखेको- 'तरुण तपसी प्रदक्षिणा' शीर्षकको लेख रहेछ त्यो । उपकुलपतिले अड्काएको त्यो लेख 'रचना' मा छाप्ने तारतम्य मिलायौँ हामीले । प्रज्ञाबाट त्यसको टाइप गराएर उपकुलपतिको जानकारीबिना नै हामीले हात पार्‍यौँ । स्रोतबारे प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखेर आफ्ना पिताको पाण्डुलिपि रु.१००/- पारिश्रमिक लिएर 'रचना' मा प्रकाशनार्थ दिएको स्वीकृतिपत्र महाकविका छोरा पद्मप्रसाद देवकोटाबाट लियौँ । 'रचना' पूर्णाङ्क (१४ -२०२४) मा त्यो प्रकाशित भयो । समालोचनामा समेत महाकविको दक्षता प्रमाणित गर्ने सो लेख अत्यधिक चर्चित भयो । पछि साझा प्रकाशनले 'स्रष्टा देवकोटा द्रष्टा परिवेश' शीर्षक पुस्कमा सो लेख समावेश गर्‍यो तर कसरी ? कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने स्रोतबारे कुनै जानकारी दिइएन । सम्पादकले पनि त्यसबारे केही खुलाएको देखिएन । 'काम गर्ने हनुमान जस पाउने ढेडु' उखान चरितार्थ भयो त्यस घटनाबाट ।
नेपाली साहित्याकाशका विराट् प्रतिभा महाकवि देवकोटासँग आफ्नो परिवारको निकटता रहनु मेरो निम्ति निकै ठूलो गर्वको कुरा हो । आफ्नो प्रातिभ ज्योतिले नेपाली वाङ्मयलाई आलोकित पारिरहेका महाकवि देवकोटाको मूर्ति मात्रले पनि हाम्रो जीवनमा सदैव आलोक छरिरहने छ ।
विख्यात भारतीय साहित्यकार डा. शिवमङ्गल सिंह सुमनको महाकवि देवकोटाबारेको टिप्पणी अत्यन्त सारपूर्ण लाग्दछ मलाई । डा. सुमन लेख्छन्- ''नेपाली साहित्यमा देवकोटाको आविर्भाव एउटा घटना थियो भने उहाँको महाप्रयाण एउटा इतिहास बन्यो । निःसन्देह विश्वकविहरूका पङ्क्तिमा उहाँको पनि आसन छ । यस्तो अभावको क्षतिपूर्ति सजिलै हुन सक्तैन । यूतो युगान्तकारी प्रतिभा पाउन राष्ट्रले फेरि उत्सर्गशील तपूयामा रत हुनुपर्छ । यिनै एउटा कविलाई पाएर नेपाली साहित्य सधैँका लागि विश्व साहित्यको समकक्षी भएर गौरवान्वित भएको छ ।''
यिनै भावनासँग सहमत हुँदै महाकविमा हार्दिक शब्द श्रद्धा अर्पण गर्दछु ।